यसरी पोखे कार्याकर्ताले देउवामाथि आक्रोश - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
२९ कात्तिक, नेपालगञ्ज ।
आधा खुला भएको भुइँतलाको सानो हलमा खचाखच कार्यकर्ता भरिएका थिए कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा। सुरक्षाकर्मीलाई भीड मिलाउन हम्मेहम्मे थियो। पार्टी जिल्लासचिव कपिल शर्माले कार्यक्रम सुरु गरे। कार्यकर्तालाई जिज्ञासा राख्न भने। मञ्चमा बसेका प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापति किरण कोइरालासँग कानमा खुसुक्क भन्दै थिए, ‘केको जिज्ञासा छ र ? ऐले ढिला हुन्छ ? ’ कोइरालाले राख्न दिऊँ भन्ने इशारा गरिन्।
लगत्तै भीडबाट एक जना कार्यकर्ता जुरुक्क उठे। ‘हामी पनि पार्टीमा लागेर जीवनै सक्किन लाग्यो, हाम्रो नामै सिफारिसमा परेन, टिकट वितरणमा रहेका मेरा भाइ उमेरका केन्द्रीय सदस्य किशोरसिंह राठौरले बरु मेरो उमेर सोध्नुभयो ? ’ बाँके क्षेत्र नं. ३ का ती कार्यकर्ता हरिभक्त उप्रेतीको रिस अझै सकिएको थिएन, ‘के हामी जिल्ला बस्नेहरूको पार्टीमा कुनै हैसियत छैन ? ’ आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कार्यक्रम सक्दै उनले अन्तिममा भनिन् ‘पीर, दुःख तपाईं, हामी सबैलाई छ तर, त्यो भन्दा धेरै पीडा र दुःख त्यो बाम गठबन्धनले जितेपछि हुनेछ, त्यसैले जस्तोसुकै पीडा भए पनि यसपटक कांग्रेसले हार्नुहुन्न, म पनि लाग्छु तपाईंहरु पनि पार्टीलाई जिताउन लाग्नुस्।
PreviousXi offers condolences to Iran, Iraq over earthquake as death toll rises
Nextचुनावको ‘थ्रेट’ विप्लव समूह : सरकार अन्योलमा